စံချိန်များမှာ ကိန်းဂဏန်းများသာဖြစ်ကြောင်း နေမာပြောဆို၊ နေမာအပေါ် အလွန်အကျွံ မျှော်လင့်ချ? - Yangon Media Group
စံချိန်များမှာ ကိန်းဂဏန်းများသာဖြစ်ကြောင်း နေမာပြောဆို၊ နေမာအပေါ် အလွန်အကျွံ မျှော်လင့်ချ?
ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူးနေမာက ဒဏ်ရာကြောင့် ကာလရှည် ကြာအနားယူခဲ့ရပြီးနောက် အသင်းအတွက် ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ချိန်တွင် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ကျေနပ်မိသော်လည်း ဂန္ထဝင်ကစားသမားများ၏ ဂိုးသွင်းစံချိန်ကို ချိုးဖျက်ရန် အာရုံစိုက်ထားမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ နေမာသည် ဒဏ်ရာကြောင့် အချိန်သုံးလကြာအနားယူခဲ့ရအပြီးတွင် ခရိုအေးရှားနှင့်ပွဲ၌ ဘရာဇီးအတွက် လူစားဝင်ကစားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုး ၅၄ ဂိုးအထိ ရှိလာခဲ့သည်။
ဖီဖာအသိအမှတ်ပြုပြိုင်ပွဲများတွင် ဘရာဇီးအတွက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားသူများအဖြစ် ရော်နယ်ဒိုနှင့်ပီလီတို့က ၇၇ ဂိုးစီ ဖြင့် ထိပ်ဆုံးတွင်ရပ်တည်နေရာ နေမာအနေဖြင့် နောက်ထပ်တစ် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ပါက တတိယနေရာမှ ရိုမာရီယို၏ဂိုးသွင်းစံချိန်နှင့် တူညီနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် နေမာက ”ကျွန် တော့်အနေနဲ့ ဘရာဇီးရဲ့ထိပ်တန်း ဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒီကစားသမားတွေဟာ ကျွန်တော်မရှိခင်ကတည်းက ဒီမှာရောက်နေခဲ့ကြသူ တွေဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်လေးစား အားကျရသူတွေလည်းဖြစ်လို့ ကျွန်တော်က သူတို့ထက် ဘယ် တော့မှပိုကောင်းလာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ရော်နယ်ဒို၊ ရိုမာရီယို၊ဇစ်ကို နဲ့ ပီလီတို့အားလုံးဟာ ကျွန်တော် လေးစားအားကျရသူတွေချည်း ဖြစ်လို့ အယောက်စီတိုင်းကို ကျွန် တော်လေးစားမှုရှိပါတယ်။ ကျွန် တော့်အနေနဲ့ အသင်းအတွက် ဂိုးသွင်းယူပြီး အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ အမြဲကြိုးစားမှာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ ထက်ပိုကောင်းတဲ့သူမဖြစ်ချင်ပါဘူး။ တကယ်တော့ စံချိန်တွေဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းတွေပါပဲ”ဟုပြော ကြားခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် ဘရာဇီးအသင်းနည်းပြတိုင်တီက အသင်းအတွက် တစ်ကျော့ပြန်ကစားနိုင်ခဲ့ရာတွင် နေမာအနေဖြင့် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သော်လည်း ကစားသမားအပေါ် အလွန်အကျွံမျှော်လင့်မထားရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိ ပေးပြောကြားခဲ့သည်။ နည်းပြတိုင်တီက ”နေမာဟာ အခုပွဲမှာ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့အ ကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကို ပြမရသေးခင်အထိ ခြေစွမ်းအတက်အကျရှိပါလိမ့်ဦးမယ်။ နောက်ထပ် သုံး၊ လေးပွဲလောက်ကစားပြီးမှ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်လို့ သူ့အပေါ်အလွန်အကျွံ မမျှော်လင့်စေချင်ပါဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
စည်းမျဉ်းသစ်ကြောင့် အချိန်တိုင်း သတိရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆောက်ဂိတ် သတိပေး
ဒေါ်နယ်ထရန့် ရာထူးမှ ဆင်းပေးရစေရန် သတင်းပေးနိုင်သူအား ဒေါ်လာ ၁ဝ သန်း ချီးမြှင့်မည်